Ny mpanelanelana dia ny hafatra - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Day-by-Day > Ny mpanelanelana no hafatra
“Imbetsaka, na dia talohan’ny androntsika aza, Andriamanitra dia niteny tamin’ny razambentsika tamin’ny fomba maro samihafa tamin’ny alalan’ny mpaminany. Fa ankehitriny, amin’izao andro farany izao, Andriamanitra dia niresaka tamintsika tamin’ny alalan’ny Zanany. Tamin’ny alalany no namoronan’Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ary nataony ho lovany ny zava-drehetra. Ao amin’ny Zanaka no anehoana ny voninahitry ny Rainy, satria endrik’Andriamanitra tanteraka Izy » (Taratasy ho an’ny Hebreo. 1,1–3 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Ireo mpahay siansa ara-tsosialy dia mampiasa teny toa ny "maoderina", "post-modern" na koa "post-post-modern" mba hilazana ny ora iainantsika. Izy ireo koa dia manome soso-kevitra teknika samihafa amin'ny fifandraisana amin'ny taranaka tsirairay.
Na inona na inona fotoana iainantsika, ny fifandraisana marina dia tsy azo atao raha tsy miteny sy mihaino ny haavon'ny fahazoana ny roa tonta. Ny fitenenana sy ny fihainoana dia midika ho fiafarana. Ny tanjon'ny serasera dia ny fahazoana tena. Ny fahafahan'ny olona iray miteny sy mihaino olona ary manao izany adidiny izany dia tsy midika hoe mifankahazo izy ireo. Ary raha tena tsy nifankahazo izy ireo dia tsy nifandray tsara koa fa niresaka sy nihaino fotsiny nefa tsy nifankahazo.
Hafa noho Andriamanitra izany. Andriamanitra dia tsy mihaino antsika fotsiny ary miresaka amintsika momba ny fikasany, fa mifandray amin'ny fahatakarana koa izy. Omeny antsika aloha ny Baiboly. Tsy boky fotsiny io, fa fanambarana avy amin'Andriamanitra ho antsika. Amin'ny alalàn'izy ireo dia ampitainy amintsika hoe iza izy, ny halehiben'ny fitiavany antsika, ny habetsaky ny fanomezana omeny, ny fomba hahafantarantsika azy sy ny fomba handaminana tsara ny fiainantsika. Ny Baiboly dia torolàlana ho amin'ny fiainana feno izay nantenain'Andriamanitra ho an'ny zanany. Na dia lehibe aza ny Baiboly, dia tsy ny fifandraisana ambony indrindra.
Ny fomba farany ampitan'Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny fanambarana manokana amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Mianatra momba azy io isika ao amin'ny Baiboly. Mampita ny fitiavany Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fahatongavany ho iray amintsika, mizara ny maha-olombelona amintsika, ny fijaliantsika, ny alaim-panahintsika ary ny alahelontsika. Notaomin'i Jesosy ny fahotantsika, navelany ny helony, ary nasiany toerana ho antsika eo anilan'Andriamanitra. Na ny anaran'i Jesosy aza dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Jesosy dia midika hoe: Andriamanitra dia famonjena. Ny anarana iray hafa miantso an'i Jesosy, "Immanuel", dia midika hoe "Andriamanitra miaraka amintsika".
Jesosy dia tsy Zanak'Andriamanitra fotsiny fa "Tenin'Andriamanitra" izay manambara amintsika ny Ray sy ny sitrapon'ny Ray. «Tonga olombelona ny teny ary nonina teto amintsika. Ny tenantsika dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra, toa ny Zanany Lahitokana tsy omen'Andriamanitra. Tao Aminy no niavian'ny fitiavana sy ny famindrampon'Andriamanitra »(Jao. 1:14).
Araka ny sitrapon’Andriamanitra, dia “izay rehetra mahita sy mino ny Zanaka dia ho velona mandrakizay.” ( Jaona 6:40 ).
Andriamanitra mihitsy no nanao ny dingana voalohany mba hahafantarantsika azy. Ary manasa antsika izy hifandray aminy manokana amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny fivavahana ary amin'ny fiarahana amin'ireo hafa izay mahalala azy koa. Efa fantany isika - tsy fotoana hifankahalalana bebe kokoa aminy ve?